को बन्दैछ प्रधानन्यायाधीश ? मिश्र कि राणा ? यस्तो छ परिषदको तयारी — Sanchar Kendra
को बन्दैछ प्रधानन्यायाधीश ? मिश्र कि राणा ? यस्तो छ परिषदको तयारी
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दैछ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि यसअघि परिषदले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
तर सर्वोच्चको इतिहासमै परिषदले सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भयाे । जोशी अस्वीकृत भएसँगै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुनः परिषदले अर्को नाम सिफारिस गर्न लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि अपराह्न ४ बजे बैठक बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका वरिष्ठ न्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणा छन् । परिषद्ले यी दुईमध्ये एक नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश काे बन्छ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । यसैगरी बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पनि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । दीप बस्न्यातले अवकाश पाएपछि गत फागुनदेखि अख्तियार कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ । हाल कार्यवाहकको जिम्मेवारी नविनकुमार घिमिरेले पाएका छन् ।